Indawo yokugcina yoLondolozo lomhlaza RoundUp- Ilungelo laseMelika lokwazi
Uvavanyo lomhlaza we-RoundUp
Iinkokheli ze-NYC Joyina iiFowuni zeBan kwiMonsanto Herbicide
ezaposwa ngomhla Aprili 18, 2019 by USusan Lang
"Iipaki kufuneka zenzelwe ukudlala ii-pesticides"
Amalungu amabini ebhunga lesiXeko saseNew York yazisa umthetho namhlanje Ingathintela iiarhente zedolophu ekutshizeni i-glyphosate-based herbicides kunye nezinye izitshabalalisi zetyhefu kwiipaki nakwezinye iindawo zoluntu.
Eli nyathelo lelokugqibela kwindawo yokuxhalaba malunga nokusetyenziswa kwezibulali zinambuzane, ngakumbi ukuvezwa kwemveliso yokubulala ukhula eveliswe yiMonsanto, ngoku eyiyunithi yeBayer AG. Izixeko, izithili zezikolo kunye nabathengisi kulo lonke elaseMelika baya besimisa ukusetyenziswa kweziyobisi.
Ikwangumqondiso ongaphaya wokuba inani elikhulayo labantu-abathengi, abafundisi-ntsapho, iinkokheli zeshishini kunye nabanye-bayasikhaba isiqinisekiso esivela eMonsanto naseBayer sokuba i-glyphosate herbicides efana ne-Roundup ikhuselekile ekusebenziseni ngokubanzi.
Kutshanje iBayer ikhuphe izibhengezo ezinkulu kwiWall Street Journal nakwiThe New York Times kwaye ibiqhuba umkhankaso wentengiso kamabonwakude nakwiintanethi ukukhusela ukhuseleko lweemveliso ezibulala ukhula. Kodwa iinkxalabo ziyaqhubeka nokunyuka.
"Iipaki kufanele ukuba zezokudlala hayi ukubulala izitshabalalisi," utshilo ilungu lebhunga lesiXeko saseNew York uBen Kallos, ongumxhasi kumlinganiso. "Zonke iintsapho kufuneka zikwazi ukonwabela iipaki zethu zedolophu ngaphandle kokukhathazeka ngokuba zichanabeke kwizibulali zinambuzane ezinetyhefu ezinokuthi zibanike umhlaza kunye neentsapho zabo."
Umgangatho weSixeko saseNew York ungathintela ukusetyenziswa kwamayeza okubulala izitshabalalisi ngaphakathi kweenyawo ezingama-75 zomzimba wamanzi. Kwaye iyakhuthaza iiarhente zedolophu ukuba ziye kusetyenziso lwee-pesticides, ezivela kwizinto zendalo endaweni yezinto zokwenziwa.
IGlyphosate iqhele ukusetyenziswa kwisiXeko saseNew York, ifafazwe kangangezihlandlo ezilikhulu ngonyaka kwiindawo zemifuno yoluntu ukunyanga ukhula kunye nokugqitha. U-Kallos uxelele i-EHN ukuba woyika ukuvumela ukuba intombi yakhe encinci idlale eCentral Park eyaziwayo ngenxa yomngcipheko wokuchasana neyeza lokubulala izitshabalalisi.
Inzululwazi, ulwazi loluntu luyakhula
IGlyphosate sesona silwanyana sibulala mhlaba sisetyenziswa ngokubanzi kwaye sisithako esisebenzayo kungekuphela kweempawu zeRoundup kodwa kunye namanye amakhulu athengiswa kwihlabathi liphela.
Ukusukela kwelungelo elilodwa lomenzi we-glyphosate njengombulali wokhula kwi-1974, iMonsanto ibisoloko iqinisekisa ukuba ayibangeli mhlaza kwaye ikhuseleke kakhulu ebantwini nakwimeko yokusingqongileyo kunezinye i-pesticides.
kodwa uphando lwezenzululwazi ephuculweyo kule minyaka ingamashumi idlulileyo iphikisana nala mabango eenkampani. Iinkxalabo ziye zanda emva kwe-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza I-glyphosate echaziweyo njenge-carcinogen yabantu ngo-2015.
Ngaphezulu kwamaxhoba omhlaza ayi-11,000 amangalela iMonsanto etyhola ukubhencwa kwiRoundup kunye nezinye iimveliso zeglyphosate inkampani ezithengisayo ibangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma.
Izityholo zibanga ukuba inkampani kudala yazi malunga nomngcipheko womhlaza kodwa isebenze ukugcina olo lwazi eluntwini, ngokuyinxenye ngokusebenzisa idatha yesayensi exhomekeke kubalawuli.
Izilingo ezimbini zokuqala ziphelile kwizigwebo ezivunyiweyo zejaji ezixhasa abamangali. Ityala lesithathu liyaqhubeka eCalifornia ngoku.
UKallos unethemba lokuba ulwazi loluntu oluveliswe zizilingo luya kuqhuba inkxaso yakhe. Umlinganiso ofanayo owaziswa ngo-2015 wahluleka ukuqokelela inkxaso eyaneleyo yokupasa.
"Inzululwazi iya isomelela mihla le, kwaye umdla woluntu kulo mbandela uya usomelela," utshilo uKallos.
Umzamo wamva wokunciphisa okanye wokuthintela
Inzame yaseNew York yenye yezona zijikeleze iUnited States zokuthintela okanye ukunciphisa ukusetyenziswa kweemveliso zeglyphosate kunye nezinye izibulala-zinambuzane.
Amakhomishina esiXeko eMiami bavotela ukuvalwa kwi-glyphosate herbicides ngoFebruwari. Ngo-Matshi, iBhodi ye-Los Angeles yeBhodi yaBaphathi ikhuphe ukunqunyanyiswa Kwizicelo ze-glyphosate kwipropathi yendawo yokuvumela ukuvavanywa kokhuseleko ziimpilo zikawonke-wonke kunye neengcali zokusingqongileyo.
Uluhlu lwezithili zesikolo, iidolophu kunye namaqela abanini makhaya athintele okanye anciphise ukusetyenziswa kwe-glyphosate kunye nezinye izitshabalalisi ezinobungozi ezifanayo kubandakanya ezininzi eCalifornia apho iOfisi kaRhulumente ye-Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) idwelisa i-glyphosate njenge-carcinogen eyaziwayo.
Kule veki, iqela laseLeesburg, eVirginia, abahlali wabiza amagosa edolophu ukuyeka ukusebenzisa i-glyphosate ecaleni kweebhanki zomjelo wommandla.
Abanye abathengisi abakhulu baqalise ukurhoxa kwimveliso ye-glyphosate. I-Harrell's, i-turf esekwe eFlorida, indawo yegalufa kunye nomthengisi wemveliso yezolimo, wayeka ukunikela ngeglyphosate iimveliso ukusukela ngoMatshi 1.
Umphathi we-Harrel u-Jack Harrell Jr. uthe umboneleli we-inshurensi yenkampani ebengasakulungelanga ukubonelela ngamabango ahambelana ne-glyphosate, kwaye inkampani ayinakho ukufumana ukhuseleko olwaneleyo kwezinye iinshurensi.
I-Costco iyekile ukuthengisa i-Roundup-osisithethi seshishini uthi bayisusile imveliso kwi-inventri ka-2019. Abathengisi kwiivenkile ezahlukeneyo abanxibelelana nabo baqinisekisile ukuba abasaziniki iimveliso.
Kwaye inkampani enkulu ezimeleyo yegadi yeziko iPike Nurseries eGeorgia ithe ekuqaleni kwale nyanga ayibuyiseli ukubuyiselwa kweRoundup ngenxa yokuhla kwentengiso.
Ukupheliswa kweemveliso zikaMonsanto khange kuncedwe lupapasho lwehlabathi olujikeleze izilingo ezintathu zokuqala zomhlaza we-Roundup, eziye zabeka ii-imeyile zangaphakathi zeMonsanto kunye neengxelo zokucwangciswa ngobuchule kuluntu ngokubanzi kunye nobungqina obucetywayo malunga nokuphathwa kwenkampani kwezona zinto zixhalabisayo zesayensi malunga neengozi zayo. amayeza okubulala ukhula.
Kwilingo eliqhubekayo ngoku, ityala elilethwe yindoda nomfazi bobabini bane-non-Hodgkin lymphoma abatyhola ekusebenziseni kwabo iRoundup, ubungqina baziswa kwiveki ephelileyo malunga nokukhululeka apho umbulali wokhula anokufunxa kulusu lomntu.
Kwabekwa ubungqina obubonisa ukuba iMonsanto isebenze ngokusondeleyo ne-Arhente yoKhuselo lweNdalo vimba ukuphononongwa kwetyhefu yeglyphosate yiarhente karhulumente eyahlukileyo.
Ityala langoku, kunye nezilingo ezimbini ezidlulileyo, zonke zibandakanyile ubungqina bokuba iMonsanto ibandakanyeka ekubhaleni ngokuchanekileyo amaphepha athile enzululwazi agqibe iimveliso ze-glyphosate zikhuselekile; kwaye iMonsanto wachitha izigidi zeerandi kwiiprojekthi ezijolise ekuchaseni izigqibo zoososayensi bomhlaza bamazwe aphesheya ababeka i-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka.
Intlanganiso ka-Bayer yabanini zabelo yonyaka imiselwe u-Epreli 26 kwaye abatyali mali abanomsindo bafuna iimpendulo ezivela kwi-CEO yeBayer uWerner Baumann oqhube ukufunyanwa kweMonsanto, ukuvala isivumelwano se- $ 63 yezigidigidi ngaphambi nje kokuba uvavanyo lokuqala lomhlaza lwe-Roundup luqale ngoJuni ophelileyo.
The inkampani igcina I-glyphosate herbicides ayiyiyo i-carcinogenic kwaye iya kuphumelela ekugqibeleni.
Kodwa umhlalutyi weQela lezeMali laseSusquehanna uTom Claps ulumkise abanini zabelo ukuba balungiselele ulungiso lwehlabathi oluphakathi kwe- $ 2.5 yezigidigidi kunye ne- $ 4.5 yezigidigidi. "Ayisiyongxaki yokuba 'ukuba' iBayer izakufikelela kwisivumelwano sehlabathi seRoundup, yinto yokuba 'nini,' utshilo uClaps kubatyali zimali kwingxelo yakutshanje.
UMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria Uyalele iBayer ukungena kulamlo, ukuxoxa malunga nokuhlala kwimeko ye-Roundup.
Pesticides Bayer AG, UBen Kallos, umhlaza, Costco, glyphosate, Harrell's, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, Yisonge yonke, Uvavanyo lomhlaza we-RoundUp, UWerner Baumann